के आत्महत्याको रोकथाम गर्न सकिन्छ ? डा.कमल गौतमले यस्तो भन्नुहुन्छ ! हेर्नुहोस भिडियो – Samacharpati Samacharpati के आत्महत्याको रोकथाम गर्न सकिन्छ ? डा.कमल गौतमले यस्तो भन्नुहुन्छ ! हेर्नुहोस भिडियो – Samacharpati
पोखरा, २२ साउन । भनिन्छ, चरम निराशा र तनाव उत्पन्न भएपछि मानिसले आत्महत्याको बाटो अँगाल्छ। तर कारण यत्तिमात्रै होइन। आत्महत्यासम्म पुर्‍याउन मानिसलाई विभिन्न कारणले प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। आत्महत्या के हो, यस्तो सोच किन आउँछ र यसबाट बच्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डा. कमल गौतमसँग गरिएको कुराकानी
आत्महत्या भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले जानीजानी आफ्नो जीवन आफैले समाप्त पार्ने कार्यलाई बुझिन्छ। जसले आत्महत्याको प्रयास अथवा आत्महत्या नै गर्दछन्, त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत व्यक्तिलाई कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोग हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। त्यसमध्ये धेरैजसो व्यक्तिहरूमा आत्महत्याको कारण उदासीनता वा डिप्रेसन हुने गर्दछ। बाँकी ५ प्रतिशत व्यक्ति भने कहिलेकाहीँ एक्कासि तनावपूर्ण अवस्थामा पनि आत्महत्याको प्रयास गर्दछन्।
डायमण्डमा बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न